छानीछानी किन्नुहोस, विभिन्न कम्पनीको साढे एक लाख कित्ता सेयर लिलामीमा – Arthatantra.com
छानीछानी किन्नुहोस, विभिन्न कम्पनीको साढे एक लाख कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाडौ । बिभिन्न २४ वटा कम्पनीको एक लाख ४७ हजार ४१२ कित्ता सेयर बुधबारदेखि लिलाम बढाबढमा विक्रीहुने भएको छ । सिद्धार्थ क्यापिटलले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको विभिन्न कम्पनीको सेयर लिलामीमा राखेको हो । क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित सिद्धार्थ लगानी वृद्धि योजना १ परिपक्व भएपछि सेयर विक्री गर्न लागेको हो ।
इच्छुक लागनीकर्ताले पुस २६ गतेबाट लिन चाहेको सेयर संख्या र मूल्य खुलाई के कतिमा लिन चाहेको हो सो खुलाई ७ दिन भित्र (माघ २ गते) बोलपत्र आवेदन पेश गर्न सक्नेछन् । बोलपत्र फारम बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
बोलपत्र पेश गर्दा लिलामीमा आएको सबै सेयरको २५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत वा सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । बोलपत्र माघ ३ गते विहान ७ः३० बजे सिद्धार्थ क्यापिटल, नारायणचौर नक्सालमा खोलिने जनाईएको छ ।
सिद्धार्थ म्युचलफण्ड अन्र्तगत सञ्चालित उक्त सामूहिक लगानी कोष योजना पुस ९ गते परिपक्क भइसकेकाले मंसिर १३ गते धितोपत्र बोर्डको निर्देशन अनुसार योजना खारेजीमा लैजान कोषको स्वामित्वमा रहेका सेयरहरु बिक्री गर्न लागिएको हो ।
यसरी लिलामीमा ल्याएको सेयरमध्ये सबैभन्दा बढी मेगाा बैंकको ७४ हजार ३७६ कित्ता रहेको छ भने सबैभन्दा कम माहुली सामुदायिक लघुवित्तको १४० कित्ता रहेको छ ।
२०७४ पुष २६ गते प्रकाशित
सेयर किनबेच नखुलाउने कम्पनीलाई धितोपत्रको कारबाही सुरु काठमाडौ । मर्जर पुरा गरी एकीकृत कारोबार सुरु भएको लामो अबधिसम्म पनि शेयर कारोबार नखोल्ने […]
१५ वर्षमा घर छाडेर हिंडेका युवक ३७ वर्षमै खर्बपति सुकुम्बासीबाट खर्बपति बन्ने सपना थोरैका लागि मात्रै विपनामा परिणत हुन सक्छ । […]
४० करोड २७ लाखको हकप्रद बेच्दै एसियन लाईफ, कहिले हुन्छ सुरु ? काठमाडौ । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले ४० करोड २७ लाख बराबरको हकप्रद निष्कासन गर्ने भएको छ […]
नागरिक लगानी कोष अन्यमा सामेल, सेयर बजारमा के हुन्छ असर ? काठमाडौ । नागरिक लगानी कोषको समुहगत परिसूचक परिवर्तन भएको छ । फाईनान्स समुहबाट कारोकार […]
६४ करोडको इन्स्योरेन्सको आइपीओ बजारमा, तोकियो बिक्रि प्रबन्धक काठमाडौ । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले ६४ करोड पचास लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्काशन […]